कोरोना भाइरस : सतर्क रहौं, आतंकित नबनौं- विविधा - कान्तिपुर समाचार
माघ ११, २०७६ समीरमणि दीक्षित
चीनको हुवेइ प्रदेशको हुवान सहरमा देखिएको चिनियाँ नयाँ कोरोना भाइरस संक्रमणले विस्तारै विश्वव्यापी रूप लिंँदैछ । विगत केही दशकका यस्ता अन्य भाइरल संक्रमणको इतिहास हाम्रो मनमस्तिष्कमा अहिले पनि घुमिरहेको बेला नयाँ संक्रमणको समाचारले समाजमा आतंक सिर्जना हुनसक्छ ।
हुन पनि एभियन फ्लु, स्वाइन फ्लु, सार्स, मेर्सजस्ता विश्वव्यापी संक्रमणले विभिन्न समयमा विभिन्न देशमा धेरैको ज्यान लिएकै हुन् । तथापि यो नयाँ भाइरसले जनमानसमा किन यति त्रास निम्त्याएको हो ? त्यो बुझ्नु जरुरी छ ।
कोरोना भाइरस एक प्रकारको हामीलाई लाग्ने साधारण रुघाखोकीदेखि यसअघि देखिएका घातक सार्स र मेर्स रोगहरूसँग जोडिएको छ । यसले फोक्सोमा असर गर्दै अन्य विभिन्न लक्षणसहित मृत्युसम्म गराउन सक्छ । यति भन्दै गर्दा हामीले यो कुरा बिर्सनु हुन्न कि प्रत्येक वर्ष संसारभर अर्को भाइरस परिवार जसलाई हामी इन्फ्लुएन्जा भनेर चिन्छौं, त्यसले पनि मानव ज्यान लिन्छ र धेरैलाई बिरामी गराउँछ । इन्फ्लुएन्जा भाइरस र कोरोना भाइरस दुई फरक परिवार हुन् ।
हालसम्मको तथ्य अनुसार नयाँ कोरोना भाइरस ६ भन्दा बढी देशमा देखापरेको छ । चीनमा मात्रै ८ सयभन्दा बढी बिरामी देखिएका छन् । अन्य देशमा पनि बिरामीको संख्या बढ्ने क्रममा छ । यस्तो रोगका बिरामी ठ्याक्कै यति नै छन् भनेर ठम्याउन गाह्रो हुन्छ । किनभने लक्षण र परीक्षणबाट मात्रै पहिचान हुन्छ । जसका लागि समय चाहिन्छ । त्यसमाथि यो रोग र साधारण अन्य रुघाखोकी–ज्वरोको लक्षण झन्डै–झन्डै उस्तै हुन्छन् । बेलायतको इम्पिरियल कलेजका अनुसन्धान टोलीले केही दिन अघिमात्र सार्वजनिक गरेको वैज्ञानिक आँकलनमा यो रोगले ८ हजारभन्दा बढीलाई संक्रमण गरिसकेको हुनसक्ने लेखिएको छ ।
तथ्य के कस्ता छन् ?
कोरोना भाइरसले यसअघि विभिन्न समयमा ल्याएको महामारी र हाल देखिएको चिनियाँ संक्रमणको प्रारम्भिक तुलना गर्ने हो भने अहिलेको भाइरस संक्रमण कमजोर देखिन्छ । रोग छिटो सरिरहेको त छ, तर रोगले मृत्यु निम्त्याउने क्षमता सार्स र मेर्सभन्दा निकै कम देखिन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले हालै जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार रोग लागेका र मृत्यु भएकाको अनुपात ४ प्रतिशत छ (१०० जना संक्रमितमा ४ जनाको मृत्यु हुनसक्छ) ।
यस अघि सार्स र मेर्समा देखिएको अनुपात क्रमश: १५ प्रतिशत र करिब ४० प्रतिशत थियो । यसैगरी इन्फ्लुएन्जा ए, एच ५ एन १ (एभियन फ्लु) मा यो अनुपात करिब ६५ प्रतिशत थियो भने इन्फ्लुयन्जा ए, एच १ एन १ मा १ प्रतिशतभन्दा पनि कम थियो । यस हिसाबले हाल देखिएको नयाँ कोरोना भाइरस कमजोर भन्न मिल्छ । हाल करिब २५ जनाको मृत्यु भएको तर तीमध्ये अधिकांश ७० वर्षभन्दा माथिका र अन्य रोगले संक्रमित भएको तथ्य बाहिर आइसकेको छ । जसले यो नयाँ भाइरसले सामान्य मानिसमा मृत्यु निम्त्याउन नसक्ने कुरा पुष्टि गर्छ । भाइरस छिटो वा ढिलो परिवर्तन भइरहन्छ र अझै कमजोर वा अझै बलियो हुनसक्छ । त्यसैले आउँदा दिनमा यो तथ्यांक परिवर्तन हुनसक्छ । हालको तथ्यांकले हामी आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्थाचाहिं देखिन्न ।
केही दिनअघि विश्व स्वास्थ्य संगठनका महानिर्देशक डा. टेड्रोस अढ्नम घेब्रेसुसको अध्यक्षतामा यो संक्रमणबारे आधिकारिक धारण सार्वजिनक गर्न आकस्मिक बैठक बसेको थियो । साधारण अवस्थामा महामारी हुने शंका सिर्जना हुने देखिनासाथै यस बैठकले ‘पब्लिक हेल्थ इमर्जेन्सी’ घोषणा गर्छ । यो भनेको जनस्वास्थ्यलाई मध्यनजर गरेर संसारभरका सदस्य देशहरूलाई उच्च सतर्कता अपनाउनुका साथै निगरानी र नियन्त्रणका विभिन्न कार्य अघि सार्न निर्देशन दिने प्रक्रिया हो । तर तत्काललाई उसले यो कदम रोजेन र थप तथ्य र तथ्यांकको लागि समय माग्यो ।
आगामी दिनमा कुन निर्णय हुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ । तर एउटा कुरा प्रस्ट छ– हाल देखिएको तथ्य अनुसार यो कदम जरुरी देखिएन । हुन पनि यसभन्दा अघिका महानिर्देशक डा. मार्गरेट च्यानले २००९ को एच १ एन १ महामारीमा ज्यादै छिटो इमर्जेन्सी घोषणा गरे जसले विश्व अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर गर्‍यो । तर २०१५ मा एबोला महामारी ढिलो घोषणा गरेको र त्यसले धेरैको ज्यान गएको आरोप पनि आएको हो । त्यसैले हालको नयाँ कोरोना भाइरस संक्रमणबारे लिने निर्णयहरूमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले विशेष सावधानी लिनु स्वाभाविक मान्न सकिन्छ ।
नेपालले आफूलाई कसरी तयार राख्ने ?
यो रोग नेपाल छिर्ने झन्डै–झन्डै पक्का छ । हामीकहाँ चिनियाँ पर्यटक साथै त्यहाँ पढ्ने नेपाली विद्यार्थी पनि धेरै छन् । उनीहरू हवाइमार्गबाट छिर्ने क्रम जारी थियो, छ र रहिरहनेछ । विमानस्थलमा निगरानी गर्न त्यति सजिलो छैन । जाडो मौसममा रुघाखोकी र ज्वरो लिएर आउने जोकोहीलाई यो नयाँ कोरोना भाइरस रोगी हो भनेर ठम्याउन सकिन्न ।
विमानस्थलको हेल्थ डेस्कले तत्काल गर्नुपर्ने एउटै काम हो– ज्वरो आएका सबैलाई पहिचान गरेर परीक्षणको लागि पठाउने र नतिजा नआएसम्म क्वारेन्टाइनमा राख्ने । हामीकहाँ छिटोछरितो परीक्षण र नतिजा उपलब्ध गराउने संरचना सरकारी स्तरमा छैन । साथै निजी स्तरम उपलब्ध संरचनाको सही उपयोग हुनसकेको छैन । अहिलेको आकस्मिक अवस्थामा सरकारी र निजी संरचना सबै परिचालन गर्ने हो भनेचाहिँं समयमै देशभित्र संक्रमण नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।
यस बाहेक आम नागरिकले हाल आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । सकेसम्म रोग देखिएका ठाउँ र मानिसबाट पर नै रहनु वेश हुन्छ । यदि यसो गर्न सकिन्न भने एन ९५ मास्क लगाउँदा संक्रमण सर्ने सम्भावना घट्छ । साथै जताततै नांगो हातले नछुने, हात धुने अथवा स्यानिटाइजर चलाउने जस्ता सावधानीका माध्यम अपनाउने गरेमा रोग सर्नबाट बच्न सकिन्छ । यो रोगका लागि खोप अथवा उपचार छैन । अधिकांश अवस्थामा कोरोना भाइरसले लाग्ने रुघाखोकी विरुद्ध मानव शरीरले आफ्नै जैविक प्रतिरोध क्षमताले आफैलाई ठिक पार्न सक्छ र अरु भाइरस संक्रमणजस्तै बालक, वृद्ध तथा अन्य रोग (जस्तै– एचआईभी, डायबिटिज, मृगौला रोग) भएकाहरूले विशेष सावधानी लिनु जरुरी हुन्छ ।
कोराना भाइरस अथवा कुनै पनि जीवाणुसँग जोडिएका रोगका संक्रमणबारे प्रारम्भिक समयमा सञ्चार माध्यमले पनि विचार पुर्‍याउनु पर्छ । तथ्यहीन अथवा सनसनीपूर्ण शीर्षकले आम नागरिकमा पुग्न जाने त्रासले नकारात्मक असर गर्न सक्छ । त्यसैले सबैले आआफ्नो क्षेत्रबाट संयमित भएर कामकार्य गर्नु जरुरी हुन्छ ।
प्रकाशित : माघ ११, २०७६ ०८:२५
माघ ११, २०७६ जनार्दन थापा
अफ्रिकी मुलुक तान्जानियाको एउटा रोचक लोककथाको सार छ— एक पटक वर्षायाममा ठूलो पानी पर्‍यो र खोलानाला निकै बढे । जताततै पानी–पानी भरियो । बाढी यस्तो आयो कि रूखको टुप्पामा पुग्न सक्ने बाँदर बाहेक सबै डुब्न पुगे । स्थिति साम्य भएपछि बाँदरहरूले तल जमिनमा हेरे र त्यहाँ माछाहरूलाई पानीमा पौडिरहेको देखे ।
एउटा लालबुझक्कड बाँदरले उसका साथीहरूलाई भन्यो, साथीहरू तल हेर, ती प्राणीहरू डुबिरहेका छन् । अरूले पनि होमा हो मिलाए । लालबुझक्कडले भन्यो, ‘सायद यिनीहरू पनि डुबे, किनकि यिनीहरूका खुट्टा रहेनछ । विचरा यिनले आफूलाई कसरी बचाउन् ?’ उनीहरूले ती माछालाई डुब्नबाट बचाउने निर्णय गरे । त्यसपछि बाँदरहरूले माछालाई पानीबाट एक–एक गरी झिकेर किनारमा राखे । एकछिनपछि त्यहाँ माछाको थुप्रो लाग्यो । एउटा उपबुज्रुक बाँदरले भन्यो, ‘हेर यी थाकेका थिए र अब आरामसाथ सुतिरहेका छन् ।
यदि हामी नभएको भए यी खुट्टा नभएका माछा सबै डुबेर मर्थे ।’ अर्कोले भन्यो, ‘होइन, यी सबै हामीबाट तर्किन खोजिरहेका छन् । किनकि यी माछाहरूलाई हामीले भलाइ गर्न खोजेको हो भन्ने थाहै छैन । जब यी ब्युँझिन्छन्, यिनीहरू हामीहरूप्रति आभारी हुनेछन् । किनभने त्यतिबेला यिनीहरूलाई थाहा हुनेछ कि हामीले यिनीहरूलाई मुक्ति दिएका छौं ।’ यो कथा अहिले निकै चर्चामा रहेको छाउपडी प्रथा र छाउगोठ भत्काउने अभियानसँग सान्दर्भिक लागेकोले यहाँ साभार गरिएको हो । यस सन्दर्भमा यस लेखमा कुरीति मानिएको छाउपडी प्रथा र यसलाई सम्बोधन गर्न गरिएको प्रयासहरूबारे मानवशास्त्रीय विश्लेषण गर्ने जमर्को गरिएको छ ।
महिनावारीलाई मानव संस्कृतिको एउटा प्राचीन संस्कारको रूपमा मानिन्छ । यससँग सम्बन्धित विश्वास र मूल्यहरू संस्कृति अनुसार फरक–फरक पाइन्छन् । त्यही विश्वास र मूल्यका आधारमा समाजहरूमा विभिन्न खाले अभ्यासहरू पाइन्छन् । यदि कुनै समाजमा महिनावारी भनेको अपवित्र अवस्था हो भन्ने विश्वास छ भने त्यसले विभिन्न बन्देजका प्रचलनहरू जन्माउँछ । त्यो मध्येको एक हाम्रो समाजमा रहेको छाउपडी पनि हो । मानवशास्त्रीय अन्तर–सांस्कृतिक अध्ययनहरूले (जस्तै बकले र गोटलिबको ‘ब्लड म्याजिक : द एन्थ्रोपोलोजी अफ मेन्सट्रुएसन’) के देखाएका छन् भने महिनावारी सम्बन्धी निषेधहरू विश्वव्यापी सांस्कृतिक प्रचलन (कल्चरल युनिभर्सल) हुन् ।
केही संस्कृतिहरूमा यसलाई नकारात्मक रूपमा हेरिएको छ भने अन्यमा यो महिलाको सकारात्मक अनुभवको रूपमा रहेको छ । सकारात्मक रूपमा महिलालाई महिनावारी हुँदा एक विशिष्ट अवस्था प्राप्त हुन्छ, जहाँ महिला अनिच्छित यौनिक तथा घरेलु दबाब र जिम्मेवारीबाट मुक्त हुन्छिन् । अमेरिकाका चेरोकी नाम गरेका आदिवासी समूहमा रजस्वलाको भइरहेका अवस्थाका महिलाहरूलाई अत्यन्त पवित्र र शक्तिशाली मानिन्छ । यसैगरी अमेरिकाकै न्युयोर्क आदिवासी समूहमा पनि हाम्रो छाउपडीजस्तै घर नजिकै एउटा सानो झुप्रो बनाएर महिनावारी अवधिभरि महिला छुट्टै बस्ने प्रचलन छ । यी महिलाहरूले त्यसलाई धेरै सकारात्मक अनुभवको रूपमा लिन्छन् । दक्षिण एसियाकै कुरा गर्ने हो भने मानवशास्त्री ओ–वाइने मागीले उत्तर–पश्चिम पाकिस्तानको कलाशा उपत्यकामा गरेको अध्ययन अनुसार त्यहाँका महिलाहरूको सामुदायिक महिनावारी घर हुन्छ, जसलाई पुरुषहरूले पनि सम्मान गर्छन् । यस
घरले महिलाहरू बीचको लैङ्गिक एकतालाई बलियो बनाउने स्थानको रूपमा कार्य गर्छ भन्ने निष्कर्ष उनले निकालेका छन् ।
माथिका अध्ययनहरूले के सङ्केत गर्छन् भने महिनावारीको अवस्थामा महिलाहरू अलग रहनु नै समस्या हो भन्ने निष्कर्ष सही नहुन पनि सक्छ । यद्यपि अनुभवले के देखाएको छ भने समाज जटिल हुँदै जाँदा र पितृसत्ता सुदृढ हुँदै जाँदा धर्मको आडमा महिनावारीलाई महिला दमनको एउटा महत्त्वपूर्ण हतियार बनाइयो । विकसित मानिएका समाज–संस्कृतिहरूमा पनि महिनावारी सम्बन्धी कुनै न कुनै निषेधहरू (ट्याबु) देखिन्छन् । संयुक्त राज्य अमेरिकामा गरिएको एउटा सर्वेक्षणमा (बिलिङ्स एन्ड एट्टिच्युड अफ योङ गर्ल रिगार्डिङ मेन्सट्रुयसन–विलियम, १९८३) अधिकांश वयस्क र किशोर–किशोरीहरूले महिनावारीलाई सार्वजनिक चर्चाका लागि अनुपयुक्त विषयको रूपमा बुझ्ने गरेको पाइयो । केटीहरूले केटाहरू र विशेषगरी पितासँग यस बारेमा कुरा गर्नु हुँदैन भन्ने धारणा पाइएको थियो । पछिल्लो एक अध्ययनमा (जस्तै थिंक्स भन्ने संस्थाले गरेको) अमेरिकामा ५८ प्रतिशत महिलाहरूले महिनावारीबारे लज्जा महसुस गर्ने गरेको तथ्य देखाएको छ (इन्डिपेन्डेन्ट, ३ जनवरी २०१८) । यी तथ्यले के देखाउँछन् भने महिनावारीसँग सम्बन्धित निषेध र विभेदहरू थोरबहुत सबै समाजहरूमा पाइन्छन् ।
हरेक सांस्कृतिक प्रचलनहरूका आफ्नै ऐतिहासिक, पारिस्थितिक र सामाजिक सन्दर्भहरू हुन्छन् । विश्वास र प्रचलनहरूका आ–आफ्नै आधारहरू हुन्छन् । हाम्रो आँखाले हेर्दा छाउ सम्बन्धी विश्वास गैरतार्किक र अन्धविश्वास लाग्लान् । तर त्यही समूहको विश्व–दृष्टिकोण र समग्र परिवेशसँग जोडेर हेर्‍यो भने यसको आशय र अर्थ बुझ्न सकिन्छ । कानुनी दण्डको त्रास भए पनि छाउ नछोड्नाको पछाडि पाप र धर्म, दण्ड र वरदानको जस्ता सांस्कृतिक अवधारणाहरू छन् । राज्यले धेरै गरे केही दिन पक्रेर राख्ला, जुन एक प्रकारले निश्चित अवस्था हो । तर उनीहरूका लागि देउता रिसायो भने कस्तो अनिष्ट हुनसक्छ, जसको जोखिम अनुमान गर्न सकिने खालको छैन । तसर्थ छाउलाई हाम्रो नभएर उनीहरूको आँखाले हेर्न र बुझ्न पनि आवश्यक छ । पवित्र–अपवित्र, कु–संस्कार, हिंसा, रूढिवाद आदि सापेक्षिक अवधारणाहरू हुन् । अर्को अर्थमा यी सामाजिक निर्माण (सोसल कन्सट्रक्ट) हुन् ।
सामान्यतया शक्तिशाली समूहहरूले यस्ता अवधारणको निर्माण गर्छन् र आफ्नो विचार र व्यवहारलाई असल र अर्कोलाई कमसल भन्ने ‘लेबल’ लगाउँछन् । छाउ र नछुने भएको बार्ने अभ्यास रूपमा फरक भए पनि सारमा लगभग एकै हो भन्न सकिन्छ । सम्भ्रान्तहरू महिनावारी बार्दा संस्कार हुने कमजोर समूहले अर्को तरिकाले त्यो अभ्यास गर्दा कुरीति हुने भन्ने तर्क जायज मान्न सकिन्न । मानवशास्त्रीय भाषामा यसलाई सांस्कृतिक–पूर्वाग्रह (एथ्नोसेन्ट्रिजम) भनिन्छ । तसर्थ सांस्कृतिक र सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणमा छाउ प्रथालाई अपराधको रूपमा व्यवहार गरिनु उचित देखिन्न । यसको अपराधीकरणले यो समस्यालाई समाधान गर्ने नभई झन् जटिल बनाउन सक्छ । छाउगोठ भत्काउने, दण्डित गर्ने र राज्यका सुविधाहरूबाट वञ्चित गर्ने जस्ता कार्यहरू यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुन सक्दैन । यसले महिलाहरूलाई झन् दोहोरो अन्यायमा पारिरहेको छ । एक हिसाबले ‘तावाबाट उफ्रेर भुंग्रामा’ भनेजस्तो अवस्था भएको छ । शताब्दियौंदेखि जरा गाडेर बसेको परम्परालाई उखेल्न त्यति सजिलो हुँदैन । छाउ प्रथा एक बहुआयामिक समस्या हो र यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयासहरू पनि बहुआयामिक हुन आवश्यक छ । सांस्कृतिक परिवर्तनहरू स्वचालित र योजनाबद्ध वा सचेत प्रयासबाट दुवै तरिकाले हुन्छन् । सचेत वा योजनाबद्ध परिवर्तन त्यतिबेला मात्र सहज र दिगो हुन्छ, जब त्यो सांस्कृतिक रूपमा संवेदनशील हुन्छ । यसको अर्थ छाउपडी समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि पहिला यसलाई त्यसको सांस्कृतिक सन्दर्भमा बुझ्नुपर्छ र सुहाउँदो संस्कृति–मैत्री नीति र कार्यक्रममार्फत परिवर्तनका प्रयासहरू गर्न आवश्यक छ ।
छाउपडी जस्ता सांस्कृतिक अभ्यासहरूलाई सामान्यतया चेतनाको अभावले गर्दा भएको हो भन्ने मान्यता छ, जुन मूल रूपमा पश्चिमी विकासे अवधारणाबाट प्रभावित छ । निश्चय पनि शिक्षा र ज्ञान महत्त्वपूर्ण तत्त्वहरू हुन् र ज्ञान शक्तिको एउटा स्रोत पनि हो । तर त्योमात्र पर्याप्त छैन भन्ने कुरो सहरी छाउले पनि प्रमाणित गर्छ । छाउ लगायतका परम्पराहरू सम्बन्धित समाज र समूहको सामाजिक र आर्थिक बनोटसँग अभिन्न रूपमा जोडिएका हुन्छन् ।
कसैबाट नलुकेको तथ्य के हो भने छाउपडी त्यस्तो ठाउँमा जरा गाडेर बसेको छ, जुन हाम्रो देशको सबैभन्दा पछि पारिएको वा अति सिमान्तीकृत भूगोल हो । एक अर्थमा छाउको निरन्तरता ऐतिहासिक रूपमा हाम्रो समाजमा रहेको क्षेत्रीय, लैङ्गिक र आर्थिक विषमता र शोषणको परिणाम हो भन्न सकिन्छ । यो समस्याको जरो त्यहाँ रहेको चरम असमानता, भोक र गरिबीसँग जेलिएको छ । यस्तो सामाजिक विषमता र शोषणलाई भत्काउने सार्थक प्रयास नगर्नु, तर छाउगोठ भत्काउन तम्सनु भनेको छोटकरी बाटो खोज्नु र परोक्ष रूपमा जिम्मेवारीबाट पन्छिनु पनि हो । भौतिक छाउगोठ भत्काउन खासै रचनात्मकता र समय नलाग्ला । तर यसको सामाजिक र सांस्कृतिक जरो उखेल्न धेरै रचनात्मक प्रयासहरू र धैर्य आवश्यक छ ।
सामान्यतया माथिबाट थोपरिएका हस्तक्षेपहरूले समस्यालाई सम्बोधन गर्ने नभई यसको रूप बदल्ने र जटिलता बढाउने गरेको देखिन्छ । रोगको कारणको निदान नगरी लक्षणहरूको उपचारले मात्र यसलाई निको पार्न सक्दैन । पर्याप्त अनुसन्धान, योजना र विकल्पहरू बिना गरिएका परिवर्तनका प्रयासहरू असफल भएका उदाहरणहरू धेरै छन् । संरचनागत समस्याहरूको बोध, सांस्कृतिक संवेदनशीलता र सम्बन्धित समुदायहरूको सम्मानजनक सहभागिता सहितको अभियान आवश्यक छ भन्ने तथ्य राज्य र अन्य सरोकारवालाले जति छिटो बुझ्छन्, त्यतिनै छिटो यो समस्याको व्यावहारिक र दिगो समाधान सम्भव हुन्छ । अहिले विशेषगरी राज्यतर्फबाट बलपूर्वक गरिएका प्रयासहरूले कतै माथिको अफ्रिकी लोककथालाई चरितार्थ गरिरहेको त छैन भन्ने सवाल खडा गरेको छ ।
थापा पृथ्वीनारायण क्याम्पस, पोखरामा (चिकित्सकीय) मानवशास्त्र अध्यापन गर्छन् ।
प्रकाशित : माघ ११, २०७६ ०८:२३